Lexus RX 450h 2009 အား တိုကျကွီးမွို့ တွင်​ ipivi.com မှတဆင့်​ ဝယ်​ယူပါ။
ရောင်းချသူ: Paing MH
Lexus RX450h (R.H.D)Model. : 2009 ( Facelift 2013 )Engine power: 3500 CC ( hybrid ) , Lower Fuel consumption with ECO mode Colour. : Pearl White Seater: 5Option. : Original TV kilo - 33xxxInterior - Red Power Seat , Seat Memory , Seat Air Con ,LED Headlight , Back Camera , Auto High Beam , နောက်ဖုန်းမော်တာ , HUD ( Speed ကို အရှေ့လေကာမှန်မှာပေါ်ပါတယ် ) , လျော့ ဘား အနိမ့် အမြင့် , အနောက်ပိုင်း ကြီးပဲနိမ့်လို့ရတယ် , တာယာ အသစ် ) , Original Black Box ပါဝင် ပါတယ် ,RX350 လို Shock Bar Type မဟုတ်ပါ လေအိပ် Type ဖြစ် သောကြောင့် ညိမ်ညောင်းမှုအရမ်း ရှီ ပါ တယ် ! Wheel Tax မှာလဲ ဒီ ရုပ် ပါ အမည်ပေါက် ကား ပါ မ စီး ဖြစ် လို့ ရောင်း တာ ပါ ကားမကောင်းလို့မဟုတ် ပါ စိတ်ကြိုက်စစ် ဆေး နုိုင် သည် !ရန်ကုန်တိုင်း တိုက်ကြီးမြို့နယ် တွင် ကြည့် ရ မည် လိုက် မ ပြ ပါ Price - ၁၀၇၅ ကို ညှိုနှိုင်းရောင်းချပေးပါမည် Ph - 09974001239 , 095394369
ရန်ကုန်တိုင်း , တိုကျကွီးမွို့